Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) - Hello Sayarwon
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ)
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) ကဘာလဲ။
Bulimia (Bulimia Nervosa ဟုလည်းခေါ်သည်) ဆိုသည်မှာ အစားအသောက်စားသည့်ပုံစံပျက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျင် အစားစားလျင် မထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ အလွန်အကျွံစားမိခြင်းများ အမြဲလိုလိုဖြစ်နေတတ်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းချင်သောအခါ၊ သို့မဟုတ် စားပြီးသော အစားအသောက်များကို ရှင်းပစ်ချင်သောအခါ လူအများစုသည် ဝမ်းနှုတ်ဆေးစားခြင်း သို့မဟုတ် လက်ထိုးအန်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ဖန်များလာသောအခါ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း မှ တဆင့် Bulimia ဖြစ်တတ်သည်။
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Bulimia သည် ယောင်္ကျားများထက် မိန်းမများတွင် အဖြစ်များသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များတွင် ပို၍ အဖြစ်များသည်။ သင်၏ရင်းနှီးသော တစ်စုံတစ်ယောက်တွင် Bulimia ဖြစ်နေသည်ဟု သံသယဖြစ်ပါက သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Bulimia ၏အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ တစ်နေ့ထဲတွင် အကြိမ်ရေအများကြီး အလွန်အကျွံစားခြင်း ကို လပေါင်းများစွာ ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုလူသည် တခါတရံတွင် ကယ်လိုရီများသော အစားအသောက်များကို ပမာဏ အများကြီး စားတတ်သည်၊
များသောအားဖြင့် သူတပါးမသိအောင် တိတ်တိတ်လေးစားတတ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေစဉ် အချိန်အတွင်းတွင် သူထိုသို့ အလွန်အကျွံ စားနေခြင်းကို သူ့ဘာသာသူလည်း မထိန်းချုပ်နိုင်ပေ။
အလွန်အကျွံစားခြင်းသည် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ပျက်လာပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမလာစေရန် အတင်းအကြပ်လုပ်ဆောင်မှုများရှိလာနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် အန်ထွက်အောင် အတင်းအကြပ်လုပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန်လုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းနှုတ်ဆေးများ၊ ဆီးဆေးများ စားခြင်း၊ များပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူ့ဘာသာသူ စိတ်သက်သာမှုရရှိစေတတ်သည်။
Bulimia ဖြစ်သော လူများသည် ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်ပဲ ရှိတတ်သော်လည်း သူ့တို့ကိုယ် သူတို့ ကိုသူတို့ ပုံမှန်ထက်ဝနေသည်ဟုထင်တတ်ကြသည်။
သူတို့တွင် ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်သာ ရှိတတ်သဖြင့် အခြားသူများက ထိုသူတို့တွင် ထိုကဲ့သို့သော ရောဂါဖြစ်နေသည်ကို သတိမပြုတတ်ကြပေ။
အခြားလူများမှ သတိပြုမိနိုင်သော လက္ခဏာများမှာ
လေ့ကျင့်ခန်းများ ကို အချိန်အကြာကြီးပြုလုပ်နေခြင်း။
ရုတ်တရက် အစားအများကြီးစားခြင်း၊ အစားအသောက်များအများကြီးဝယ်ပြီး ပျောက်ကုန်ခြင်း။
ဝမ်းနှုတ်ဆေးများ၊ ပိန်ဆေးများ၊ အန်ဆေးများ၊ ဆီးဆေးများ၏ အခွံများလွှင့်ပစ်ခြင်း။ တို့ဖြစ်သည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသော အခြားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပိုမိုသိရှိလိုလျင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
သင် သို့မဟုတ် သင့်သိသော တစ်စုံတစ်ယောက်တွင် ထိုလက္ခဏာများ ရှိပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးတိုင်ပင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ Bulimia ရှိသော လူအများစု သည် သူတို့တွင် ထိုသို့ ပြသနာရှိနေကြောင်းကို ဝန်မခံကြပေ။ သူတို့ ကုသရန် ငြင်းဆိုနိုင်သောကြောင့် Bulimia သည် အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကို ထိုသူများအား အသိပေးသင့်ပါသည်။
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေနိုင်သော အတိအကျ အကြောင်းတော့ မသိရှိရပေ။ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုနည်းသော လူများတွင် Bulimia ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။ မျိုးရိုးှဗီဇ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မိသားစု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းများသည် ဖြစ်ပွားရသော အကြောင်းရင်းခံများတွင် ပါဝင်သည်။ အကြောင်းရင်း တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ချက်ထက်ပိုသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် Bulimia ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ခန္ဓါကိုယ် ပုံစံဆိုးရွားခြင်း– အလှအပနှင့် အောင်မြင်မှုကို တွေးခေါ်ခံယူမှုပုံစံများသည် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်ပုံစံကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုနည်းခြင်း- ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုနည်းခြင်းကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးမထားခြင်း နှင့် ပြီးပြည့်စုံလိုခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုအရာများကြောင့် Bulimia ဖြစ်နိုင်ချေများပါသည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်း – Bulimia ဖြစ်သော အမျိုးသမီးများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်ခံရသောနောက်ကြောင်းများ ရှိတတ်သည် ဟု လေ့လာမှုများက ပြောပါသည်။
အခြားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာများ၊ ဒေါသထွက်ခြင်းကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပုူပန်မှုများခြင်း၊ ထပ်တလဲလဲစိတ်စွဲလန်းတတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကျန်းမာမှုကြောင့်များကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းသွင်ပြင် ကို အလေးထားသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုများ – ပိန်စေရန် ဖိအားပေးခံရသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ ဥပမာ မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်၊ နှင့် အကပညာရှင်များ။ ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းရန် လိုအပ်သော အားကစားသမားများလည်း ပါဝင်သည်။
ဘဝပုံစံ ကြီးစွာ ပြောင်းလဲခြင်း- ဘဝတွင် ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲများဖြစ်သောအခါ စိတ်ဖိစီးမှုများတတ်သောကြောင့် Bulimia ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲများတွင် အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း၊ ကောလိပ်သို့စတင်တက်ရောက်ခြင်း နှင့် တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ပြတ်စဲခြင်း တို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
ဖြစ်နိုင်ချေများသော အကြောင်းအချက်များ မရှိခြင်းကြောင့် သင့်တွင် Bulimia မဖြစ်ဟု မပြောနိုင်ပါ။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သေချာစွာ ရောဂါအမည်တပ်နိုင်ရန် သင်၏ ဆရာဝန်သည် အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ ဆေးကုသမှုရာဇဝင်ကို စစ်ဆေးခြင်း။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို အကဲဖြတ်ခြင်း။
အာဟာရချို့တဲ့မှု သို့မဟုတ် သွေးတွင်းဓါတ်များမညီမျှမှုကို စစ်ဆေးရန် သွေးစစ်ခြင်း။
အန်ခြင်းကြောင့် အက်ဆစ်အထွက်များသဖြင့် ဖြစ်သော သွားပေါက်များ၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်းများ ကို စစ်ဆေးရန် သွားများကို စစ်ဆေးခြင်း။
Bulimia (အစားအသောက်မူမမှန် ပြဿနာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် ရောဂါအခြေအနေ ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကုသမှုအောင်မြင်ရန် ရောဂါရှိသောသူသည် သူ့တွင် ရောဂါရှိကြောင်း ဝန်ခံဖို့လိုအပ်ပြီး အကူအညီတောင်းခံဖို့လိုအပ်သည်။ ကုသမှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
ထောက်ပံကူညီသော အဖွဲ့များသည် အနုစားရောဂါကို ကုသရာတွင် အကူအညီဖြစ်နိုင်သည်။
ထောက်ပံကူညီသောအဖွဲ့များဖြင့် မသက်သာသော လူနာများအနေဖြင့် စကားပြောခြင်းဖြင့် ကုသခြင်း၊ အာဟာရနှင့်ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ ကဲ့သို့သော နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်းများကို လိုအပ်နိုင်သည်။
ဆေးဖြင့်ကုသခြင်းတွင် selective serotonin re-uptake inhibitors ကဲ့သို့သော စိတ်ဓါတ်ကျရောဂါသက်သာစေသောဆေးများ ပါဝင်သည်။ ဆေးပေးခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းကို အတူတွဲပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းစေသည်။
အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာစိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ သို့မဟုတ် အအန်ပျောက်စေရန် ဆေးကုသရမည်ဆိုပါက ဆေးရုံတက်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Bulimia ကိုသက်သာစေရန် နေထိုင်မှုပုံစံ မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း၊ အိမ်တွင်းကုသမှုများမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Bulimia ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
• အထောက်အကူပြုနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဆက်သွယ်ပါဝင်ပါ။ ထိုအဖွဲ့များသည် သင်ခံစားနေရသော စိတ်ဖိစီးမှုများကို သက်သာစေရန်ကူညီပေးနိုင်ပြီး အစားအလွန်အကျွံစားစေရန် အန်စေရန် ပြုလုပ်နေခြင်းကို သက်သာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
• သင်၏ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားသည်များကို အတိအကျလိုက်နာပါ။
• အာဟာရကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိအောင်စားသုံးပါ။ သင့်အစားအသောက်ထဲတွင် အရေးကြီးသော အာဟာရနှင့် ဗီတာမင်ဓါတ်များ ဆုံးရှုံးနေနိုင်သည်။ သင်၏ အာဟာရပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် သင်လိုအပ်သည်ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
• သင့်စိတ်ထဲတွင် ဖြစ်နေသည်များကို သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးသူ နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
• စိတ်ဖိစီးမှုပြေပျောက်ရန် နည်းလမ်းများရှာဖွေပါ။
• သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်ပါ။ သင့် ခန္ဓါကိုယ်နှင့် ပတ်သတ်၍ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှစ်သက်တတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်တွင် သိလိုသည်များရှိပါက သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 251.
Poison ivy.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/poison-ivy/basics/definition/con-20025866. Accessed July 13, 2016.
Poison ivy.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000027.htm.accessed July 13, 2016.